लकडाउनमा विरामी छोरालाई भे`ट्न आमाले गरिन् २७ सय किलोमिटरकाे लामो यात्रा !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/लकडाउनमा विरामी छोरालाई भे`ट्न आमाले गरिन् २७ सय किलोमिटरकाे लामो यात्रा !!
अस्पतालमा उपचार गराइरहेका आफ्ना छोरालाई भेट्न भारत`मा एक महिलाले झण्डै दुई हजार ७`०० किलोमिटर लामो यात्रा गरेका छन्। कोरोना भाइरसको सङ्क्र`मण फैलिन नदिन भन्दै सरकारले देश`व्यापी लकडाउनको घोषणा गरेपछि सवारी साधनहरु बन्द भएकाले उहाँले कठिन यात्रा गर्नु परेको थियो। उनले यात्रा`का क्रममा कतै पैदल त कतै ट्या`क्सीको प्रयोग गरेको बताइएको छ।
यात्राका क्रममा झण्डै छ राज्य पार गरेकी ५० बर्षीया ती महिलाको छोराको जोध`पुरमा गम्भीर अवस्थामा उपचार भइरहेको छ। उनीसँगै एक नातीनी र अर्का एक जना नातेदारले पनि पैदल यात्रा गरेका हुन्। यो यात्राका लागि उनीहरुलाई तीन दिन लागेको थियो। लामो यात्रा गरेकी शिलम्मन वासनले जोधपुरबाट पीटी`आईसँग कुराकानी गर्दै आफ्नो छोराको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी दिए।
आफ्नो २९ बर्षीय छोरो अरुण कुमारको स्वास्थ्य अवस्थामा सु`धार भइरहेको उनले बताए। छोरो अरुणलाई मांश`पेसीसम्वन्धी रोग लागेको उनको भनाइ छ। ‘भगवानको कृपाले कुनै ठूलो समस्या विना नै हामी यहाँ आइपुग्न सफल भयौँ,’ उनले भने। उनले आफुहरु केरलाबाट तमिल नाडु, कर्ना`टक, महा`राष्ट्र, गुजरात हुँदै राजस्थानको जोधपुरसम्म आइपुगेको जानकारी दिए।उनीहरु अप्रिल ११ मा हिडेर अप्रिल १४ मा जोधपुर पुगेका हुन्।
जोधपुरमा सिमा सुरक्षा बल (विएस`एफ)मा जवानकोरूपमा कार्यरत अरुण कुमार विदा मनाउन गत फेब्रुअरीको अन्त्यतिर आफ्नो घर`गाउँ आउएका थिए। घर`बाट फर्केपछि उनी विरामी परेकी हुन्। उनलाई शुरुमा पखाला लागेको बताइएको थियो। विरामी अरुण कुमारको केरलामा एक ब`र्षीय बच्चा पनि छ।
एनआइसी एशियाका ऋणीहरूलाई बैंकद्वारा भारी स हुलियत दिने घोषणा
नयाँ नक्सा संसदमा पारित भएको ३ घण्टा नहुँदै भारतले कडा आपति जनाउंदै नेपाललाइ कडा जवाफ दिदै निकाल्यो बिज्ञप्ति !